Ciidamada Daraawiishta Galmudug oo isaga baxay Caasimada Dhuusamareeb - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Ciidamada Daraawiishta Galmudug oo isaga baxay Caasimada Dhuusamareeb
Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa lagu soo warramaya in ay gaaraeen Degmada Galinsoor ee Gobolka Galduud, waxaana wararku ay sheegayaan in ay yihiin Ciidan Gadoodsan.
Waxaa la sheegay in Ciidanku ay Xalay isaga bexeen Fariisimihii ay ku lahaayeen Magalaada Dhuusamreeb ee Xarunta Maamulka Galmudug, waxaana, iyagoo sida la sheegay doonayay in ay socdaal ku gaaraan magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka mudug.
Sababta keentay in Ciidanku Soo baxaan ayaa waxaa kasoo baxaya warar kala duwan, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Ciidanku ay mushaarkoodii waayeen, halka warar kale ay sheegayaan in ay doonayaan in ay ka qayb qaataan Xiisad kacsanaan ah oo ka taagan Gaalkacyo, taasi oo ka dhalatay soo dhisidda Golaha degaanka.
Ciidanka ayaa inta ay socdaalka ku jireen waxaa ay hor istaag kala kulmeen Ciidamo kale oo isku daayay in ay Celiyaa, balse wararku waxaa ay sheegayaan in Ciidanka caraysan ay ka dhaha adeygeen in ay hakadaan, kuwaas oo socdaalkooda sii watay, haddana ku sugan sida wararku sheegayaan Galisoor, waxaana intaa u dheer in ay yihiin Ciidanku kuwo hubeysan oo wata Shan gaari oo kuwa dagaalka ah.
Saraakiisha Ammaanka Galmudug wali kama hadlin waxyaabaha ku qasbay Ciidanka Daraawiishta in ay ka baxaaan Dhuusamareeb, mana jirto cid caddeysay sababta rasmiga ah eek a dambeysat gadoodka Ciidanka Daraawiishta maamulka galmudug.
Previous articleDFS oo Magacwday Gudi matalaya DG xubina ay ka tahay Somaliland
Next article(Akhriso) Xarunta NEOC ee uu Kheyre xariga ka jaray, ayaa mar labaad waxaa Dhagax Dhigay Rooble!